Momba anay |Micro-Semiconductor.com - mpamatsy fitaovana elektronika
Micro-Semiconductor.com dia fikambanana mpividy manerantany manome vahaolana arak'asa mahomby sy mahomby amin'ny OEM lehibe sy mpanamboatra fifanarahana manerantany. Manokana izahay amin'ny fitadiavana ireo fitaovana sarotra tadiavina, lany andro, faran'ny fiainana, fitaovana nozaraina ary maharitra ela.
Miaraka amin'ny fanohanana Micro-Semiconductor.com dia nahatratra ny marika ianao
Ny mpanjifa rehetra tompoinay dia mitady ny hanompo ny mpanjifa amin'ny sehatra tsena manokana. Ity dia singa iray lehibe amin'ny teknolojia sy serivisy izay amporisihanay hanohanana ny fahitana anao. Ny ekipanay dia mitondra traikefa mivantana sy mivantana amin'ny alàlan'ny rindranasa marobe izay mandrakotra anay ary manampahaizana manokana amin'ny famoronana rindranasa mifanaraka aminy. Manome vahaolana feno izay mifanentana amin'ny haavon'ny zava-bita, ny tontolo iainana, ny fepetra takiana amin'ny lalàna ary ny fenitra indostrialy voafaritra amin'ny tsena tsirairay ampidirinay.
Micro-Semiconductor.com koa dia lohalaharana amin'ny famaritana sy fitarihana ireo mpanjifa mitady hitrandraka vola amin'ny tsena mipoitra. Hitantsika eny amin'ny faravodilanitra mba hiomanana mialoha amin'ny alehan'ny tsena.
Ny sasany amin'ireo tsena lehibe indrindra tohananay dia eto ambany miaraka amin'ireo rindranasa manakaiky tsena marobe:
Aerospace sy fiarovana, Automotive sy fitaterana, Serasera, fahitana mirona, angovo, fikarakarana ara-pahasalamana, automatique an-trano sy fananganana, Indostria, Jiro, fiarovana ary fanaraha-maso, Wearables
Mifanaraka hatrany izahay hatramin'ny 2003, natokana hanampiana ny mpanjifantsika hahita haingana sy marina mahita Hard, Find, End of Life, voatokana sy maharitra Lead Time, ary mahazo singa elektronika vaovao sy tena izy amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Fantatray tsara fa ny fahasarotan'ireo loharano elektronika efa lany andro. Ny mpividy dia tokony handany hatramin'ny 60% amin'ny fotoam-pividianana azy ireo, toy ny indroa mahita ny faritra mahazatra. Miorina amin'ity fanamby ity, ny Micro-Semiconductor.com dia manatsara hatrany ny lisitry ny tahiry ao aminay ary ny tambajotran'ireo mpamatsy manerantany mba hampihenana ny tsingerim-bidinao, hampihena ny vidin'ny fifanakalozana ary hanomezana singa elektronika tsara amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Androany, ny tahiry ao amin'ny trano fivarotanay dia mihoatra ny 1.000.000 SKUs, voatahiry sy voatahiry isan-karazany ao anatin'ny trano arovan'ny ESD - Hongkong, Singapore ary Etazonia. Izany no antony tsy ahafahan'ireo orinasa mahavita ny takiana amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana mahazatra, dia mitodika any amin'ny Micro-Semiconductor.com izy ireo raha te hahita vahaolana eo noho eo.
Amin'ny maha superstore amin'ny Internet mifantoka amin'ny mpanjifa dia manatsara ny serivisinay hatrany izahay, mamorona sehatra natokana ho an'ny mpanjifa (avy amin'ny motera fikarohana sy milina e-fividianana tsara indrindra, fampahalalana momba ny vokatra be sy vaovao, hatramin'ny serivisy 24/7) , izay ahafahan'ny mpividy mahazo fidirana eo noho eo amin'ny tahiry fiarovana efa voaomana ary hamidy mora foana amin'ny alàlan'ny fanindriana haingana, fa tsy miantso loharanom-baovao eran'izao tontolo izao ho an'ny ampahany. Mandritra izany fotoana izany dia manolotra karazana serivisy isan-karazany Value Value izahay hanompoana bebe kokoa ny orinasanao. Na mila kasety sy fikorontanana ianao, fandrafetana singa na fanamboarana fifanarahana dia vitantsika daholo izany. Ny serivisy ampidirina soatoavinay rehetra dia tanterahina ao amin'ny trano fitehirizam-bokinay manara-penitra ESD ary notontosain'ny teknisianina efa za-draharaha (avy amin'ny fikambanana SMTA & IPC) sy ireo teknisianina efa za-draharaha.
Mandritra izany fotoana izany, ny Micro-Semiconductor.com dia manolo-tena hiara-hiasa amin'ireo mpanjifany mba hanomezana vahaolana tsara sy mahomby indrindra ary vahaolana hafa ilaina amin'ny mpanjifa, ary manolotra fanadihadiana feno momba ny risika mba hanampiana ny OEM hanatsara ny rojom-panolorana, amin'ny fikajiana ireo tanjon'ny orinasa ho avy sy tanjona. mila serivisy fanoloana hafa & serivisy fandinihana loza
Amin'ny ho avy, dia hitohy hitombo eran'izao tontolo izao isika ary hifantoka amin'ny fanomezana ny safidy betsaka indrindra amin'ireo faritra elektronika ao anaty tahiry, hahatanteraka amin'ny alalàn'ny fanolorantenantsika ny fanatsarana hatrany ny fizotranay, ny serivisy, ny vokatra ary ny olona aminay, manantitrantitra ny filozofianay entin'ny fanavaozana , mpanjifa mahafaly sy mahazendana amin'ny hatsaran'ny serivisy ho an'ny mpanjifanay, ny fahamendrehan'ny filaminana ary ny fandefasana ara-potoana.
Maninona ianao no mividy aminay?
Ireo singa elektronika sarotra tadiavina
Azo antoka 100% vaovao sy voajanahary
Kalitao avo lenta sy vidin'ny fifaninanana
Fiantsenana tokana ho an'ny singa elektronika
Vidim-bola vidiana ambany kokoa, fandefasana maimaim-poana
Tehirizo ny fotoanao sy ny volanao.
Mihoatra ny 1.000.000 ny isan'ny fizarana ao amin'ny tahiry handefasana azy avy hatrany. Miaraka amin'ny entana 6 + tapitrisa tapitrisa misy singa elektronika ao Micro-Semiconductor.com. Ny tontolon'ny fividianana an-tserasera mahomby miantoka ny vidin'ny fifanakalozana ambany.
Marika tombony: Xilinx, Altera, Microsemi, Microchip, Lattice, Texas Instruments, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Maxim Integrated, Cypress, Fairchild, ON Semiconductor, Zilog, Intel, Honeywell, Panasonic, Broadcom, Omron, Sharp, KEMET, AVX, Fifandraisana TE, ary maro hafa ..
Mandehana any amin'ny sokajy vokatra raha mila fanazavana fanampiny >